देउवा, पौडेलले मान्नुभएन भने उहाँहरुसँग सभापतिका लागि मेरो प्रतिस्पर्धा हुन्छ : शशांक कोइराला(अन्तर्वार्ता) - Himal Live- Leading News Portal from Nepal
४ फाल्गुन २०७५, शनिबार १५:०८
हामी धेरै पछाडि परेका छैनौँ । अलिकति प्रयास गर्ने हो भने सबैलाई उछिन्न सक्छौँ ।
सभापति बन्ने ईच्छा त सबैको हुन्छ । मेरो पनि छ । साथीहरुले भोट दिए पनि सफल हुने हो । तर, म उम्मेदवारी दिन्छु । पछि हट्दिन । तर अहिले नै भन्न हतार हुन्छ ।
कोइराला परिवारबाट एक जना मात्रै उम्मेदवार बन्नुहुन्छ ?
सकेसम्म एक जना मात्रै बन्छौँ । यसका लागि हामी तीन जना बसेर छलफल गर्छौँ । सुजाताको स्वास्थ्यले दिदैन । शेखर दा र म मध्ये एक जना उम्मेदवार बन्छौं ।
उहाँहरु मान्नुहुन्न । देउवा र पौडेल दुवैजना मान्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । यस विषयमा बेलाबखतमा कुरा भएको छ । उहाँहरु मान्नुभएन भने देउवा, पौडेल र मबीचमा सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
उहाँहरुले सहयोग गर्नुभएन भने त कसरी सभापति बन्ने ? सबैको सहयोग चाहिन्छ । त्यसैले रामचन्द्र पौडेललाई पनि मिलाएर लैजाने प्रयास गर्छु । शेरबहादुरजीसँग पनि म आग्रह गर्छु । तर, देउवाले आफैँ सभापतिमा उम्मेदवारी दिने संकेत गर्नुभएको छ ।
-पत्रकार ऋषि धमलासँगको अन्तर्वाताबाट